Ahlu sunna oo ka hadlay dilkii Sheekh Osaama, Sheegayna inuusan wax saamayn ah ku lahayn Somaliya. – Radio Daljir
Ahlu sunna oo ka hadlay dilkii Sheekh Osaama, Sheegayna inuusan wax saamayn ah ku lahayn Somaliya.
Galkacyo, May 07 – Afhayeen ururka Ahlu-sunna Sh. Yuusuf Al-qaaddi ayaa waraysi uu maanta siiyey idaacadda Daljir ku sheegay inuusan Osaama ahayn qof saamayn ku leh dalka Somaliya, maalmo ka dib markii M/wayne Shariif iyo R/wasaare Farmaajo ay sheegeen in Somaliya ka dagi wayday Al-qaacida oo Osaama Bin Laden uu horkacayo.
Waxa uu Sheegay in markii horaba ay reer Galbeedku kaalin wayn ku lahaayeen Asaaskii Al-qaacida ayna dileen Bin Laden markii uu u hoggaansami waayey qorshihii ay wateen, oo ahaa in dadka islaamka diintooda iyo dadnimadooda lagu xadgudbo.
Al-qaaddi ayaa isagoo jooga Galkaacyo sheegay in aysan wax is baddal ah habayaraatee ku keenayn xaaladda Somaliya dilka Osaama Bin Laden.